चुनाव नभएको भए एउटै कम्युनिष्ट केन्द्र बनिसक्थ्यो : प्रचण्ड
रत्ननगर, चितवन । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले एउटै कम्युनिष्ट केन्द्र बनाउने अभियानमा आफूहरु जुटेको बताएका छन् । दिनभर चुनावी घरदैलो कार्यक्रममा सहभागी अध्यक्ष दाहालले पश्चिम चितवनको पटिहानीस्थित पदमपोखरीमा साँझ भएको चुनावीसभाका क्रममा अभियान अहिले निर्वाचनका कारण मात्रै रोक
नवराज खनाल लम्की कैलाली कार्तिक २५ / बालबालीकाको अन्तरनिहित प्रतिभा प्रष्फुटन गराउनको लागि कैलालीको अम्कीमा आज वक्तृत्वकला प्रतियोगिता संम्पन्न भएको छ । वक्तृवकला प्रतियोगितामा यस क्षेत्रका करीब १८ बढी सामुदायिक तथा निजि विद्यालयमा अध्यनरत बालबालिकाको सहभागिता रहेको थियो । राष्ट्र निमार्णमा युवाहर
काठमाडौं– आगामी मंसिर १० र २१ गते हुने प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनमा मुलुकका ८ जना पुर्व गृहमन्त्रीहरु प्रत्यक्षतर्फ निर्वाचन लड्दैछन् । समग्र मुलुकको सुरक्षा अवस्था बुझेका र गृहप्रशासन हाँकिसकेका यी पुर्व गृहमन्त्रीहरु को कहाँबाट निर्वाचन लड्दैछन ? निर्वाचनको जित हारमा कति सुरक्षित छन् र उनिहरुका
काठमाडौं– एमाले र माओवादीसहितको बामगठबन्धन अहिले निकै उत्साहित छ । स्थानीय तहको चुनावमा पाएको मतलाई आधार मानेर बामगठबन्धनले आसन्न प्रतिनीधिसभा र प्रदेशसभा चुनावी नतिजाको प्रक्षेपण पनि गरेको छ । बामगठबन्धनले मुद्दाबाहेक जितको मुख्य आधार काँग्रेससँगको भोटको मतान्तरलाई मानेको छ । तर, अन्य निर्वाचन क्ष
रोल्पा : रोल्पामा आफ्नै बाबुको हातबाट छोरी र दुई नातिनीको हत्या भएको छ। रोल्पा नगरपालिका-७ गोरबोट घापाका ४३ वर्षीय लिलबहादुर पुनले आफ्नै छोरीसहित दुई नातिनीको शुक्रबार बेलुका हत्या गरेका हुन्। जिल्ला प्रहरी कार्यालय रोल्पाका प्रहरी नायव निरीक्षक सुदर्शन पन्थीका अनुसार २५ वर्षीय छोरी पबावती केसी, दुई
नेपाल विद्यार्थी संघ निर्वाचन परिचालन उप–समिति गठन ।
नवीन देवकोटा कात्र्तिक २५, लम्की / कैलाली क्षेत्र नं २ मा नेपाल विद्यार्थी संघ निर्वाचन परिचालन मूल समिती द्धारा क्षेत्र क र ख मा छुटट्टाछुट्टै उपसमिति गठन गरिएको । लम्की जेसिस स्थित नेपाली काग्रेस. निर्वाचन परिचालन समितिको सम्पर्क कार्यलयमा नेपाल विद्यार्थी संघ क्षेत्र नं २ का क्षेत्रीय अध्यक्ष त
भारतले अड्कायो महाकाली तटबन्धको काम
२५ कात्तिक, दार्चुला । ०७० सालमा आएको महाकाली बाढीले दार्चुला जिल्ला सदरमुकाम खलंगा खुम्च्याएपछि महाकाली नदी नियन्त्रण आयोजनाद्वारा निर्माण गर्न लागिएको महाकाली तटबन्धको करिब ६३ प्रतिशत काम सम्पन्न भएको छ । तर, भारतले खोतिला पहिरो हटाउन आनाकानी गर्दा अायाेजना निर्माणकाे गति सुस्त भएकाे छ । विभिन्न
वाम गठबन्धनको विजय कसैले रोक्न सक्दैनः ओली
२५ झापा, काँकडभिट्टा ।नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले आसन्न चुनावमा वाम तथा राष्ट्रवादी शक्तिको विजयलाई कसैले रोक्न नसक्ने बताएका छन् । झापा क्षेत्र नं १ को धुलाबारीमा शनिबार आयोजित अगुवा कार्यकर्ता प्रशिक्षण कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष ओलीले एमाले र माओवादी केन्द्रबीचको एकताबाट विपक्षी अत्
वाम गठबन्धनले दुई तिहाइ ल्याएर देशकाे मुहार फेर्ने दाबी
२५ कात्तिक, इलाम । नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता एंव पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा वाम गठबन्धनले दुई तिहाइ बहुमत ल्याएर मुलुकलाई निकास दिने बताएका छन् । इलामको लक्ष्मीपुरस्थित दाहालटारमा आज बिहान कार्यकर्तासँगको भेटघाटमा उनले वाम गठबन्धन नभएर कांग्रेस अधिनायकवादी भ
वर्षमान पुन चढेको गाडीमा माइन बिस्फोट
२५ कात्तिक, रोल्पा । रोल्पा जिल्लाको माडीगाउँपालिका– १ स्थिति भिट्टाबाङ भन्ने ठाउँमा माओवादी नेता वर्षमान पुन चढेको गाडीमा माइन बिस्फोट भएको छ । विप्लवमा कार्यकर्ताले बाटोमा ओछ्याएको माइन विस्फोट भएको दाबी पुनले गरेका छन् । विस्फोटका कारण गाडीमा समान्य क्षति पुगेको छ । विस्फोट लगत्तै बाटो छेउमा लुक
मतदाता शिक्षा कार्यक्रम शुरु
२५ कात्तिक, काठमाडौं । पहिलो चरणको निर्वाचन आउन १५ दिन बाँकी रहेको बेला निर्वाचन आयोगले आजबाट मतदाता शिक्षा शुरु गरेको छ । प्रतिनिधि र प्रदेश सभा निर्वाचनमा भोट हाल्न प्रेरित गर्न र भोट हाल्ने तरिका सिकाउन मतदाता शिक्षा कार्यक्रम शुरु गरिएको हो । मतदाता शिक्षाका लागि करिब २० हजार कर्मचारी परिचालन
आजै अन्त्येष्टी गरिने २५ कात्तिक, काठमाडौं । नेपालका वरिष्ठ राजनीतिज्ञ एवं पूर्वप्रधानमन्त्री कीर्तिनिधि बिष्टको शनिबार अाफ्नै निवासमा निधन भएको छ ।९० वर्षीय बिष्ट लामो समयदेखि क्यान्सर रोगबाट पीडित थिए । शनिबार बिहान साढे १० बजे काठमाडाैंकाे ज्ञानेश्वरस्थित अाफ्नै निवासमा बिष्टकाे निधन भएको परिवार
मिडिया मोनिटरिङ्गको जिम्मा प्रेस युनियनले लिने
काठमाडौं । नेपाली काँग्रेसले आगामी प्रदेश सभा तथा प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको प्रचार अभियान तिव्र पार्न सातै प्रदेशका १० मुख्य स्थानमा मिडिया सेन्टर स्थापना गर्ने भएको छ । आगामी २७ गते धनगढी, नेपालगंज, सुर्खेत, बुटवल, नारायणगढ, पोखरा, बिरगंज, जनकपुर, इटहरी र झापामा गरी एकै पटक १० मुख्य स्थानलाई केन्द
चुनावि अभियान तिब्र
देवानन्द न्यौपाने लम्की कैलाली कार्तिक २४ / नेपाली काग्रेस कैलाली निर्बाचन क्षेत्र नम्बर २ ले चुनावि अभियानलाई तिब्रता दिएको छ । आफ्नो चुनावी कार्यक्रम अन्तरगत आज क्षेत्र नम्बर २ को साविकाको सुगरखाल गाविसकोबडिगाउ, सोल्टा, तल्लो सोल्टा लगायतका ठाउमा अगुवा कार्यक्रता भेटघाट कार्यक्रम गरेको हो । कार्यक
सुन्दरहरैंचामा यस्तो देखियो डा.शेखरको चुनावी अभियान
२४ कात्तिक, सुन्दरहरैंचा (मोरङ) । शुक्रबार बिहानै बिराटनगरस्थित कोइरालानिवास कार्यकर्ताले भरिभराऊ भयो । कोशी अस्पताल नजिकै रहेको घरमा कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य डा. शेखर कोइराला कार्यकर्ताका वीचमा थिए । केहीछिनको चिया गफ सकिँदा घडीले ८ बजेको संकेत गर्‍यो । डा. कोइरालाका सहयोगी दिनेश थपलियाले उनलाई
काँग्रेस प्रवेश गर्न लागेकी माओवादी पूर्व सांसद् दोस्रो पटक अपहरणमा
कञ्चनपुर । नेपाली कांग्रेस प्रवेश गर्न दोस्रोपटक प्रयास गरेकी नेकपा माओवादी केन्द्रकी पूर्व सांसद दुर्गा खुनालाई भातृ संगठन वाइसीएलले रोकेको छ । उनी निकट स्रोतका अनुसार यसअघि पहिलो चरणको मनोनयन दर्ताकै बेला कांग्रेसमा प्रवेश गर्न खोजेकी थिइन् । त्यतिबेला पार्टी प्रवेश गर्न लागेको थाहा पाएर खुनालाई व
On air शुभ प्रभात -by